द्वन्द्वको असरले युक्रेनी बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर गरेको युनिसेफको भनाइ – Ketaketi Online
February 5, 2022 February 6, 2022 Ketaketi OnlineLeaveaComment on द्वन्द्वको असरले युक्रेनी बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर गरेको युनिसेफको भनाइ
यूक्रेनमाथि आक्रमण हुने चर्चाले युक्रेनका बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय यूनिसेफले द्वन्द्वको विषयले बाल मनोविज्ञानमा ठुलो असर पारेको जनाएको छ ।
युद्ध भयो भने के हुन्छ होला ? त्यतिबेला आफूहरु कसरी बाँचिन्छ होला ? आफन्तहरुलाई केही भयो भने के गर्नेहोला ? भन्ने जस्ता प्रश्नले बालबालिकालाई सताउने गरेको युनिसेफले उल्लेख गरेको छ । उनीहरूले आफूलाई पीडा भइरहेको अनुभव पनि सुनाएको युनिसेफले जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
बालबालिकाहरूमा आफ्नो पढाइको समेत चिन्ता देखिएको छ । उनीहरूलाई युनिसेफले आवश्यक सहयोग तथा सेवा समेत उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ । यूनिसेफले अघिल्लो बर्ष ७० हजार बालबालिकासम्म आफ्नो सहयोग पुगेको पनि जनाएको छ ।